ပိန်းဥကို ဘာကြောင့် စားသင့်သလဲ | MyFood Myanmar
ပိန်းဥကို ဘာကြောင့် စားသင့်သလဲ
အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတှကေို စားဖူးကွမှာပါ။ ပိနျးဥရော စားဖူးကွလား? မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ပိနျးဥကို ခကျြပွီး စားကွသလို ပွုတျလညျးစားကွပါတယျ။ ပိနျးဥကတော့ သရစော အဖွဈ ဆီနဲ့စား တို့ စားရပါတယျ။ အဲ့လို ခံတှငျးတှစေ့တေဲ့ ပိနျးဥမှာလညျး ကနျြးမာရေး အာနိသငျတှေ ရှိနတေယျဆိုတာ ဝမျးမွောကျစှာ မြှဝပေါရစေ။
ပိနျးဥမှာ ၁၀၀ ဂရမျမှာ ၁၁၂ ကယျလိုရီပါဝငျပွီး အာလူးထကျ ကယျလိုရီ ပါဝငျမှု ပိုမြားပါတယျ။ ဒီကယျလိုရီတှကေ Amylose နဲ့ Amylopectin လို့ချေါတဲ့ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျတှကေနေ ဖွဈလာတာပါ။ ကယျလိုရီပါဝငျမှု မြားပမေယျ့ အဆီနဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှတေော့ နညျးပါတယျ။ အမြှငျဓာတျတှေ အမြားကွီး ပါဝငျပွီး ဗီတာမငျ B6 နဲ့ ဗီတာမငျအုပျစုတှေ ပါဝငျပါတယျ။ အရေးကွီးတဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ ဖွဈတဲ့ မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ သံဓာတျတှေ ပါဝငျပွီး ပိုတကျစီယမျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ပိုတကျစီယမျဟာ နှလုံးခုနျနှုနျးနဲ့ သှေးဖိအားတှကေို ထိနျးပေးပါတယျ။
ပိနျးဥမှာ ဆိုဒီယမျနဲနဲ ပါဝငျပွီး အဆီဓာတျနညျးနညျးသာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မဂ်ဂနီဆီယမျနဲ့ ပိုတကျစီယမျတှဟော သှေးဖိအားနဲ့ နှလုံးကနျြးမာရေးကို အဓိက ထိနျးခြုပျပေးထားပါတယျ။
ပိနျးဥမှာ ဗီတာမငျ A ၊ ဗီတာမငျ C နဲ့ တခွား Antioxidant တှေ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကငျဆာဖွဈစမေယျ့ free radical တှကေို လြော့ခပြေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။
ဆီးခြိုသမားမြား အတှကျ စားသုံးသငျ့
အမြှငျဓာတျတှေ အမြားကွီး ပါဝငျတဲ့ ပိနျးဥမှာ သှေးထဲက သကွားဓာတျကို ပုံမှနျဖွဈစပွေီး အယျဆူလငျဓာတျကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။
အဆီဓာတျတှေ အမြားကွီး မပါဝငျတဲ့ အတှကျ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျမှာ စိတျမပူရပါဘူး။ ပိနျးဥဟာ အလှယျတကူ ဗိုကျပွညျ့စတေဲ့ အတှကျ နောကျထပျ အစာတှကေို စားဖို့ အလိုလို ဟနျ့တားပွီးသား ဖွဈသှားပါတယျ။
အရပွေား ကနျြးမာရေးအတှကျ သငျ့တျော
ပိနျးဥမှာ ဗီတာမငျ A နဲ့ E ပါဝငျတဲ့ အတှကျ အရပွေားအတှကျ လြှို့ဝှကျခကျြကောငျးတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဗီတာမငျတှဟော ဆဲလျအသတှေကေို ဖယျပွီး ဆဲလျအသဈတှေ ပွနျဖွဈပျေါစတေဲ့ အတှကျ နုပြိုမှုကို ရစပွေီး အရပွေားကို ကွညျလငျစနေိုငျပါတယျ။
အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို စားဖူးကြမှာပါ။ ပိန်းဥရော စားဖူးကြလား? မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပိန်းဥကို ချက်ပြီး စားကြသလို ပြုတ်လည်းစားကြပါတယ်။ ပိန်းဥကတော့ သရေစာ အဖြစ် ဆီနဲ့စား တို့ စားရပါတယ်။ အဲ့လို ခံတွင်းတွေ့စေတဲ့ ပိန်းဥမှာလည်း ကျန်းမာရေး အာနိသင်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ၀မ်းမြောက်စွာ မျှဝေပါရစေ။
ပိန်းဥမှာ ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ၁၁၂ ကယ်လိုရီပါဝင်ပြီး အာလူးထက် ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု ပိုများပါတယ်။ ဒီကယ်လိုရီတွေက Amylose နဲ့ Amylopectin လို့ခေါ်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု များပေမယ့် အဆီနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေတော့ နည်းပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်တွေ အများကြီး ပါဝင်ပြီး ဗီတာမင် B6 နဲ့ ဗီတာမင်အုပ်စုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ပိုတက်စီယမ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်ဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးဖိအားတွေကို ထိန်းပေးပါတယ်။
ပိန်းဥမှာ ဆိုဒီယမ်နဲနဲ ပါဝင်ပြီး အဆီဓာတ်နည်းနည်းသာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ပိုတက်စီယမ်တွေဟာ သွေးဖိအားနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးကို အဓိက ထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။
ပိန်းဥမှာ ဗီတာမင် A ၊ ဗီတာမင် C နဲ့ တခြား Antioxidant တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကင်ဆာဖြစ်စေမယ့် free radical တွေကို လျော့ချပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
ဆီးချိုသမားများ အတွက် စားသုံးသင့်
အမျှင်ဓာတ်တွေ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ ပိန်းဥမှာ သွေးထဲက သကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး အယ်ဆူလင်ဓာတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
အဆီဓာတ်တွေ အများကြီး မပါဝင်တဲ့ အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်မှာ စိတ်မပူရပါဘူး။ ပိန်းဥဟာ အလွယ်တကူ ဗိုက်ပြည့်စေတဲ့ အတွက် နောက်ထပ် အစာတွေကို စားဖို့ အလိုလို ဟန့်တားပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
အရေပြား ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်
ပိန်းဥမှာ ဗီိတာမင် A နဲ့ E ပါဝင်တဲ့ အတွက် အရေပြားအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်ကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေဟာ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အတွက် နုပျိုမှုကို ရစေပြီး အရေပြားကို ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ်။
MyFood Myanmar2019-11-08T09:15:11+06:30April 12th, 2016|Health, Knowledge|